मोनालिसाको पेन्टिङ्गको बिशेषता के ? - LiveMandu
मोनालिसाको पेन्टिंगको बारेमा धेरै व्यक्तिलाई थाहा छ । यस चित्रमा भएको मोनालिसाको अद्भुत मुस्कान तथा शान्त मुहारले सबैलाई आर्कषित पनि गर्यो । यो चित्रको बारेमा केही रोचक जानकारी बारेमा तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ । ल आज, तपाईलाई यसै चित्रसँग जोडिएका केही रोचक कुराहरु बताउने छु ।
आज भन्दा करिब ५०० बर्ष पहिला इटालीका एक व्यापारी फ्रासेस्को डेल जिओकोडोले आफनी श्रीमति लीसा डेल जिओकोडो को पेन्टिङ्ग त्यस समयका चर्चित पेन्टर लियोनार्डौ डा विन्ची ने बनाएका थिए । त्यस समयमा यस चित्रको नाम जिओकोडो राखिएको थियो तर समय अनुसार यसको नाम परिवर्तन हुदै मोनालिसा हुन पुग्यो ।यस चित्र पश्चात लियोनार्डो निकै प्रसिद्ध भए र यो पेन्टिङ्गलाई सर्वप्रथम फ्रान्सका राजा फ्रांसिसले किनेका थिए । फ्रांन्समा क्रान्ति पछि यसलाई नेपोलियनको शैनकक्षमा सजाईएको थियो र केही समयपछि लुव्रको म्युजियममा राखियो ।
बिन्चीको यो पेन्टिङ्गको विशेषता यो थियो कि उनले तस्बिरमा आउटलाइन बनाउने गर्दैनथे, जसलाई स्फुमातो भनिन्छ जसको कारणले उनी धेरै प्रसिद्ध पनि बने ।मोनालिसाको हल्का मुस्कानले सम्पुर्णको ध्यान केन्द्रित गर्न सफल भयो । तर पनि त्यो मुस्कानको कारण कसैलाई थाहा छैन । कोही मानिस मोनालिसाको मुस्कान हेरेर उसको मनमा धेरै कुराहरु लुकेको समेत अनुमान गरेका थिए, साथै डेनमार्क मा बनाईएको इमोशन रिकग्निशन कम्प्युटरको अनुसार मोनालिसा ८३ प्रतिशत खुसी थिइन । यो रहस्यमय र शान्त देखिने पेन्टिङ्गको मुल्य आज ८० अर्ब रुपैया भन्दा पनि बढि छ, यो संसारको सबैभन्दा महङगो पेन्टिङ्ग हो ।
Tags: मोनालिसाको पेन्टिङ्गको बिशेषता के ?
उनीसँग बिताएको त्यो जुनेली रात मजाको
तपाईको आँखाको तौल कति ?
मनै लोभ्याउने चित्र कोर्छन रोहनले (फाटो फिचर)
जिपि कोइराला अध्ययन केन्द्र द्धारा विद्यार्थीलाई सहयोग